Tags Name Magnetic - China Ningbo Sine
Magnetic Igama Badge ezikwabizwa ngokuba ibheji Imagnethi okanye igama tag ngemagnethi. It iqulathe emibini. Le piece zangaphandle kwipleyiti sentsimbi okanye iplastiki ngeteyiphu kabini kabini. Le piece engaphakathi ukunye iimagnethi neodymium super strong amabini okanye amathathu.
Magnetic Igama ibheji iquka metal igama ibheji, igama zeplastiki ibheji kwaye wena igama nebheji.
Iimbonakalo remanence High, amandla zonyanzelo, amandla aphezulu umazibuthe akayi buthathaka. Ngokungafaniyo omfisha okanye izikhonkwane, ngaba iinkcukacha ngemagnethi igama ibheji kakubi isikhumba sakho okanye iimpahla. Ukusetyenziswa Qhoboshela isiqendwana olungaphandle igama lakho ibheji okanye ikhadi ishishini bayibeka ngaphandle iingubo zakho. Emva koko ke beka omnye ongaphakathi ngaphakathi izambatho zakho. Easy ukuyisebenzisa.
Elungiselelweyo igama ibheji iyafumaneka.
Vula kunye Umxokozelo imveliso ikhathalogu yeencwadi magnetic igama ibheji
Previous: Pot ngumazibuthe
Okulandelayo: iimagnethi kwakuse